China CGQX 2500 Glass Washing Machine vagadziri uye vanotengesa | SUNKON
CGQX 2500 Girazi rekuwacha Girazi
■Girazi yekuwacha muchina unoshandiswa kune yakatsetseka girazi kusuka uye kuomesa. Chinhu chakakosha michina yekugadzirisa girazi bhizinesi. Iyo yakakodzera kugeza yakajairwa girazi, yakavharwa girazi uye LOW-E girazi chikamu. Kushambidza uye kuomesa chikamu kunogona kusimudzwa zvakazara, PLC yekutonga sarudzo.
■Iyo muchina inotora yakatwasuka chimiro, isa girazi rakatsetseka pane yekuchinjisa roller, kuburikidza neinopinda chikamu - yekuwacha chikamu - kuomesa chikamu (ine 22kw yekuomesa muchina) - kubuda chikamu.
■Girazi rekumhanyisa kumhanya rinogona inogadziriswa ne frequency inverter zvinoenderana nechinodiwa chekugadzirisa. Uye isu tinogona kugadzirisa iyozvakasiyana girazi ukobvu na magetsi ekusimudza mudziyo.
Max.Girazi reSizi 2500
Min Girazi Saizi 380 × 380mm
Nokusimudza kukwirira 400mm
Speed 0.5-12m / min
Yese Simba 27kw
01 Brush Roller
3 vaviri vaviri bhurasho chinotenderera (φ150mm), wkuku kugeza low-e girazi, maviri ma rollers ekumusoro unokwanisa iva Simudza uye haana kumbokuvadza akafukidzwa girazi pamusoro.
02 Brashi rakapfava
Chimwe chidimbu chepamusoro bhurasho roller yekuwacha yakaderera-e girazi kunyanya.
03 Simbi isina tsvina inodzivirira
Simbi isina tsvina inodzivirira chifukidziro chekudzivirira kwakanaka uye kutaridzika kwakanaka.
04 Nokusimudza mudziyo
Iyo yekumusoro yekusimudza renji yekuwachisa nekuomesa zvikamu i400mm seyakazara, zviri nyore kuitisa.
CGQX-1600 Muchina wekuwachisa girazi
Dombo 45 Dhigi Yekugeda Muchina, Fenicha Girazi Edging Machine, Kukuya Matombo Midziyo, Dombo 45 Degree Edging Machine, Girazi Miter Machine, Girazi Inosiyana Miter Machine,